Kuala Lumpur – Genting – Berjaya Hill - Sunway Lagoon (4D/3N)KH - 7001
Kuala Lumpur – Genting – Berjaya Hill - Sunway Lagoon
Day : 1 Yangon - Kuala Lumpur (Lunch On Flight & Dinner)
မလေးရှားနိုင်ငံ ရဲ့မြို့ တော်ဖြစ်တဲ့ ကွာလာလမ်ပူမြို့ သို့ ရောက်ရှိပြီး ဧည့်လမ်းညွှန်မှ ကြိုဆိုကာ ဂျန်တင်း တောင်ပေါ်မြို့  သို့ သွားကြပါမည်။ တောင်ပေါ်သို့ ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Cable car ဖြင့်သော်လည်းကောင်းတက်ကြပါမည်။ ဂျန်တင်းမြို့  လေးသည် စင်္ကာပူ နိုင်ငံ၏ အသွားအများဆုံးအပန်းဖြေမြို့  လေးဖြစ်ပြီး အေးမြလှသောရာသီဥတု အပြင် ကစားကွင်း၊ Casino များရှိသောကြောင့် အလွန်ပျော်စရာကောင်းလှပါသည်။ ဂျန်တင်းတွင် ညစားသုံးဆောင်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :2Genting - Berjaya - Kuala Lumpur (Breakfast, Lunch & Dinner)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဘာဂျာယာ တောင်ပေါ် ရှိ ပြင်သစ်ပုံစံဆောက်လုပ်ထားသော resort လေးသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ဂျပန် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ပန်းဥယျာဉ်တို့တွင်လည်ပတ်ပြီးလျှင် ဘာတူ ဂူသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာပါမည်။ လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်၊ နာရီ duty free ဆိုင်များသို့သွားပြီးလျှင် ကွာလာလမ်ပူသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာပြီး ကွာလာလမ်ပူတွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :3Kuala Lumpur & Sunway Lagoon (Breakfast, Lunch & Dinner)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် အထင်ကရနာမည်ကြီးနေရာများဖြစ်သော National Mosque, Independence Square, Palace from outside, Chocolate house, Thien Hau Temple တို့သို့သွားကာ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး ရေကစားပန်းခြံ sunway lagoon တွင် ညနေအထိနေပါမည်။ ပြီးလျှင် နာမည်ကျော် KLCC tower ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဈေးဝယ်ထွက်ကာ ညစာစားပြီး ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :4Kuala Lumpur Departure (Breakfast)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် မြို့ သစ် ပူထွာဂျာယာသို့လည်ပတ်ပါမည်။ လေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
၁. ဟိုတယ် တည်းခိုည ၃ညစာ (နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနှုန်း၊ ကလေး နှင့်မိသားစုဖြစ်ပါက ဧည့်သည်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း စီစဉ်ပါသည်)
၂. ခရီးစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စားစရိတ်များ
၃. ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည့်အတိုင်း ပို့ဆောင်စရိတ်
၄. ခရီးစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသော ၀င်ကြေးများ
၅. အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန် ခ
၆. မြန်မာ ဘက်မှ ခရီးစဉ်အားဦးဆောင်ပေးမည့် ခရီးခေါင်းဆောင်ခ
ခရီးစဉ်တွင် မပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ
၁. အခြား ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်နှင့်ဈေးဝယ်စရိတ်များ
၂. ခရီးစဉ်တွင်မဖော်ပြထားသော နေရာ သွားလာခများ
၃. ဧည့်လမ်းညွှန် နှင့် ကားမောင်း တို့အားပေးရမည့်လက်ဖက်ရည်ဖိုး
1. Genting – First World Genting Highland (3 Star)
2. KL – Furama Bukit Bintang (4 Star)